Guurka diimuhu ma dhillaysi dahsoon baa? – Kaasho Maanka
Si aan waydiinta sare ku xusan jawaab ugu helno horta waa in aan qeexnaa waxa uu guur yahay, ereyga guur micnooyin badan ayuu sameeya bulshooyinkuna waa ku kala duwan yihiin, waana noocyo badan yahay, laakiin waxa jira in ay isku raacsan yihiin inuu yahay heshiis dhex mara laba qof oo iyagu is doortay iskuna qancay go’aansadayna in ay wada noolaadaan ama qaybsadaan nolol qoysnimo.
Heshiiskaas guur waxba kama duwana heshiisyada kale ee la galo erey bixinnta mooyaane waana in laga helaa dhammaan shuruudihii heshiis lahaan jirey sida;
• Cidda geleysa heshiiska.
• Ujeedka loo geleyo.
• Waajibaadka iyo xuquuqda sida loo qaybsanayo.
• Fayo-qab maskax ahaaneed.
• Sinnaaanta dhinacyada heshiiska galaya.
• Qaabka looga baxayo iyo waxa ka dhalanaya.
• Muddada uu jirayo.
• Haddii khilaaf yimaado meesha ama habka lagu kala baxayo.
• Xorriyad in lagu galo oo aan qasab jirin… iyo qaar kale oo badan.
Hadaba saw gar ma aha in aan qeexno waxa ay tahay ama loola jeedo ereyga “Dhillaysi”, ereygan waxa loola jeedaa heshiis muddadiisu gaaban tahay oo dhex mara laba qof oo qaan gaadh ah oo isku jinsi ama kala jinsi ah kaasoo biya dhaciisu yahay in qofi uu u raaxeeyo una ogolaado inuu u galmoodo ama loo galmoodo qofka kale isagoo ka qaadanaya adduun lacageed oo hore loogu sii heshiiyey una dhigma muddada adeegaa uu qabanayey ama loo qabanyey, si kale haddaan u dhigo qof ayaa u imanaya qof shaqadan qabta wuxuuna ka dalbanayaa adeegga sare ku xusan, waxaana laga qaadayaa qadar lacag oo lagu heshiiyey, waa loo adeegeyaa kadibna wa la iska kala dhaqaaqaya.
Haddii qofka adeegan bixinayaa aanu hawshii qaban lacag laguma leh qof rabey in loo adeego.
Bal aan isla eegno guurka diimaha gaar ahaan kan soomaalida oo u badan dad haysta diinta islaamka.
Sida aan ognahay guurka islaamka ninka ayaa wax guursada. heshiiskaas guur intiisa badan ninka ayaa wax ka dheefa, haweenaydu wax sidaa usii wayn kuma laha oo iyada lafteeda waalidkeed ayaa bixinaya oo leh ereyga u danbeeya ee u ogolaanaya inay heshiiskaas qayb ka noqoto iyo in kale, sidoo kale waxa ku waajib ah ninka inuu daryeelo xaaskiisa inta ay u dhega nugushahay, galmo markuu isagu doonana ay diyaar ula tahay, waxa kaloo ku waajib ah in uu bixiyo adduun lacageed oo ay ku heshiiyaan (Meher) waa haduu u galmooday, haddii kale waxba kuma leh.
QORMO LA XIRIIRTA: Maasooniyadda: Hummaagga Cabsida
Haddii ay dhega adkaato galmada ayuu ka ilaalinayaa lana seexan maayo ama wuu dhengedeynayaa (Edbin) sidii caruurtii, wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu heshiiska laalo, iyadu hadday dalbato inay heshiika laasho oo ka noqoto oo furriin dalbato ama ay galmo u diido nacalad ayaa ku dhacaysa, maali’gta ayaana lacnadaysa muddo dheer, ku darsoo caruurta ay iyadu hooyada u ahayd kuma abtirsan karaan.
Haddii furriin dhaco iyadu dhowr bilood iyo siyaado ayay sugeysaa isaguna isla habeenkaaba mid kale ayuu soo xerayn karaa.
Halkaa waxa inooga muuqata inaanay gebi ahaanba jirin sinnaan oo aan loo sinnayn dheefta sidoo kalena aan loo sinayn waajibaadka, xuquuqda iyo doonista, waxa kaloo iska cad in guurkaas islaamku yahay heshiis dhan ka raran una adeega danaha ragga oo keliya, wuuxuna in badan ka shabahaa dhillaysiga sida bixinta adduun lacageed oo ku xidhan keliya hadi galmo dhacday sido kale daryeel ku xidhan dhega nuglaansho iyo raxlayn.
W/Q: Khaled Hassan 29th March 2018
Sheeko dheer qor!